Warshadda Nidaamka Farsamooyinka Nidaamka Biyaha, Alaab-qeybiyeyaasha - Soosaarayaasha Nidaamka Nidaamka Biyaha ee Shiinaha
Qeexitaannada Yaraynta waalka: waxay yareyneysaa cadaadiska marinka sare ee cadaadiska soo baxa hoose. Cadaadiska joogtada ah ee joogtada ah ee qulqulka qulqulka ballaaran. Waalka weyn ee duuliye ku shaqeeya ee aan cadaadis saarnayn inuu dhaco. Cadaadiska soo baxa ayaa lagu hagaajin karaa furitaanka codka Waa la ilaalin karaa iyada oo aan laga saarin khadka tuubada. Xawaaraha furitaanka / jawaab celinta. Xeerarka xasilloonida ee qulqulka eber ku dhowaad. Flanged iyo qodista waafaqsan yahay EN1092-2 PN10 / 16; ANSIB16.1 Fasalka125. Dhamaadka Grooved wuxuu u hoggaansamayaa AWWA ...
2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Balanbaalis Madax
Xarumaheena si fiican u qalabaysan iyo maaraynta tayada sare ee gaarka ah dhammaan heerarka jiilka waxay noo suurta gelineysaa inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta iibsadaha ee 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, Dhammaan alaabooyinka waxay la yimaadaan tayo wanaagsan oo adeegyo iib ah kadib. Ku jihaysan suuqa iyo u jihaynta macaamiisha ayaa ah wixii aan daba joognay. Si daacadnimo leh u rajee iskaashiga Win-Win! Xarumaheena sifiican u qalabeysan iyo maamul tayo sare leh oo heer sare ah dhamaan heerarka g ...
GD1 GD2 BS5163 AWWA C515 NRS Albaabo Fadhiga Fadhiga Adkaanta leh Spind Spindle
Faahfaahinta GD1: 150≤H1≤1000, GD2: H1≥1000. Masaafada u jirta xariiqda dhexe ee waalka ilaa dhulka waxaa bixinaya macmiilka. Markii aad bixinaysid xogta, fadlan hubso in qaladku uusan ka badnaan ± 20mm. Ku qalabeysan yahay T-wrench: 10 nooc oo isku mid ah walxaha wax lagu xiro waxaa lagu qalabeeyaa hal T-wrench. Macaamiisha waxay u baahan yihiin inay iibsadaan kabadhan haddii ay u baahan yihiin in ka badan. Gawaarida albaabkan tooska loo aasay waxaa lagu qalabeeyay BS 5163 waalka albaabka adkeysiga leh ama FM / UL NRS fadhiga adkeysi leh ...
9709 Madax Labaad Kaabista Hawada
Qeexitaannada Waxay soo bandhigayaan shaqooyinka labada Siidaynta Hawada iyo Qalliinka Hawada / Vacuum. Qiijiya hawo badan oo bilawga nidaamka ah. Waxay ka ilaalinaysaa dhuumaha dhuumaha dariiq madhan. Muuji mugga yar ee hawada inta lagu guda jiro hawlgalka nidaamka caadiga ah. NPT ama xarig mitirka ah ee laga soo galo. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Fusion daahan xidhan ama dareeraha epoxy rinji gudaha iyo dibedda. Waxyaabaha sooca ah Bo ...
9708 Qalabka Gargaarka Hawada ee Orifice
Qeexitaannada Waxay soo bandhigayaan shaqooyinka labada Siidaynta Hawada iyo Qalliinka Hawada / Vacuum. Qiijiya hawo badan oo bilawga nidaamka ah. Waxay ka ilaalinaysaa dhuumaha dhuumaha dariiq madhan. Waxay ku dhex jirtaa labada astaamood hal weyl, isafgarad iyo dhaqaale ahaanba. NPT ama xarig mitirka ah ee laga soo galo. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Fusion daahan xidhan ama dareere epoxy rinji gudaha iyo exteri ...
9701 Qalabka Hawada Hawada ee otomatiga ah
Qeexitaannada Oriifice-ka yar ee 1/16 gudaha. (1.6mm) si loo sii daayo hawo cadaadis saaran inta lagu jiro hawlgalka dhuumaha caadiga ah. Bixintu waxay ku xiran tahay hawo-mareenka iyada oo loo marayo farsamo isku xir ah taas oo awood u leh inay ku shaqeyso hawo-mareenka iyada oo la raacayo cadaadiska dhuumaha oo buuxa. NPT ama xarig mitirka ah ee laga soo galo. WRAS waa la ansixiyay. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Fusion daahan xidhan ama dareeraha epoxy rinji gudaha iyo dibedda. ...
9208 Madax Aaladda Hawada
Tilmaamaha 9208 waa qalab hawleed heer sare ah oo shaqeynaya. Kursiga adkeysiga leh wuxuu bixiyaa shaabad 100% lagu kalsoonaan karo. Naqshadeynta qolka keliya ayaa bixisa waxqabad ka wanaagsan naqshadaha qolka laba-jibbaaran. Qaadashada iyo xawaaraha qiiqa waxay gaari karaan xawaaraha codka. Naqshadeynta waxaa lagu dhejiyay si fudud birta birta ah ee u adkeysata daxalka. EPDM giraanta wax lagu xidho. Flanged iyo qodista waafaqsan yahay EN 1092-2 PN16 (Noocyada kale ayaa la heli karaa marka la codsado). Mawduuc dumar ah Si loo DIN ISO 228. ...
9110 Isku-darka Hawada Hawada ee Bullaacadaha
Qeexitaannada Hal qol oo laba jibaaran saddex-geesood hawo hawleed iyo hawo sii-deyn otomaatig ah oo otomaatig ah. Loogu talagalay inay ku shaqeyso dareerayaasha qaada walxaha adag sida bullaacadaha iyo wasakhda. Siidaynta hawo inta lagu jiro amarka nidaamka iyo hawo qaadashada inta lagu jiro dheecaanka nidaamka. Kala-soocidda dareeraha oo dhammaystiran habka shaabadaynta ayaa bixisa xaaladaha shaqada ee ugu habboon. Dhammaan qaybaha biraha gudaha ka samaysan bir bir ah. Flanged iyo qodista waafaqsan yahay EN1092-2 PN16 (Noocyada kale ar ...
9101A Labo Afriif Gargaarka Hawada
Qeexitaannada Diidmada hawada ee laba-geesoodka ah ee ku ururay hawo yar oo hawo ah inta lagu jiro hawlgalka nidaamka caadiga ah. U oggolow qulqulka tiro badan oo hawo ah inta lagu jiro dheecaanka dhuumaha. U oggolow soo saarida tiro badan oo hawo ah inta lagu jiro buuxinta dhuumaha. Ka ilaali ka hortagga dhuumaha dhuumaha dariiq madhan. Flange iyo qoditaanku waxay waafaqsan yihiin EN 1092-2 PN16 (Noocyada kale ayaa la heli karaa markii la codsado). Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° CC ..
9100 Qalabka Gargaarka Hawada ee Orifice
Qeexitaannada Waxay bixisaa shaqooyinka Labada Siidaynta Hawada iyo Qalabka I Vacuum Valves. Qiijiya hawo badan oo bilawga nidaamka ah. Waxay ka ilaalinaysaa dhuumaha dhuumaha dariiq madhan. Waxay ku dhexjirtaa labada astaamood hal bawlo, iswaafajin iyo dhaqaale badan. Flange iyo qodista si EN1092-2 PN10 / 16; ANSI B16.1 Fasalka125. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Fusion daahan ku xidhan ama ep dareere ...
6125 DIN3356 Globe Madax
Qeexitaannada qeexitaannada waxay u hoggaansamaan DIN3356. Kursiga Birta. Xadhigga la isku hagaajin karo. Xirxirida beddelka cadaadiska. Waxaa lagu heli karaa flanges EN1092-2 2 PN10 ama PN16, ANSI B16.1 Class 125. (Noocyada kale ee la heli karo marka la codsado) Dhererka waji ka waji sida waafaqsan DIN3202 taxanaha F1. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Gudaha iyo dibada epoxy dareere rinji .. Waxyaabaha Tilmaamaha Waxyaabaha Jirka jirka lagu tuuray birta Bonnet cawl bir birta Goo ...
6123 EN13789, MSS SP-85 Globe Madax
Qeexitaannada Qeexitaannada waxay u hoggaansamaan EN13789, MSS SP-85. Kursiga birta. Xadhigga la isku hagaajin karo. Xirxirida beddelka cadaadiska. Waxaa lagu heli karaa flanges EN1092-2 PN10 ama PN16, ANSI B16.1 Class 125. (Noocyada kale ee la heli karo marka la codsado) Dhererka waji ka waji sida waafaqsan taxanaha aasaasiga ah ee EN558-1 10 iyo ASME B16.10. Ikhtiyaarrada 150 psi ayaa la heli karaa. Qeexitaannada Waxyaabaha Qarxa Macdanta birta cawlan Bonnet cawl bir bir Trim bronze Disk bronze Stem ahama